IFama yaseSpellbrook yokuZitya ukutya kunye neB&B
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguMargaret
Indawo yokulala yokuzenzela ukutya kunye nesidlo sakusasa. I-£50/ubusuku ngomsebenzi omnye, i-£60/ubusuku ngokuphindwe kabini, i-£70/ubusuku ngokuphindwe kathathu. Misela kumhlaba wenkulungwane ye-17 iSpellbrook Farm ene-16 yeehektare zokuhlola. Imizuzu elishumi elinesihlanu ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseStansted.
Igumbi ngalinye linefriji, iketile, imicrowave kunye netoaster. Iindwendwe ziya kufumana ubisi, iti, ikofu, ijusi, iisiriyeli kunye neziqhamo. Igumbi ngalinye linayo 32 "iTV yescreen esicaba kunye neWIFI yasimahla. Igumbi eliphindwe kabini livule iingcango ezivulelekileyo ukuze kungene isitulo esinamavili. Igumbi lesibini lineziphu kunye nebhedi edibanisa i-superking size inokohlulwa ibe zii single size ezimbini ezipheleleyo ukwenza igumbi elinamawele. Idityaniswe neli gumbi ligumbi elincinci elinebhedi enye, kunye neengcango eziqhagamshelanayo ezitshixwayo, amagumbi anokuvunyelwa njengesuite.
Igumbi lokulala eli-1 ligumbi eliphindwe kabini eline-ensuite, linikezela ngamacango abanzi okufikelela kwisitulo esinamavili, indawo yokuhlambela yabakhubazekileyo kunye neshawa yombane. Ukuba ufuna ukungena kwisitulo esinamavili, nceda usazise ukuze sibeke iirempu njl.njl. Eli gumbi linebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi yesofa eyenza ibe yidouble encinci. Ndinayo nebhedi egotyiweyo enokuthi ibekwe kwigumbi ukunika iibhedi eziphezulu kodwa iindwendwe kufuneka ziqonde ukuba ngokusebenzisa olu khetho, igumbi lixinene. Igumbi lokulala eli-2 liphindwe kabini elinegumbi elinye elahlukileyo elikhokelela kuyo, kunye negumbi lokuhlambela le-en suite. Igumbi elinye lincinci kwaye linebhedi enye, itafile esecaleni kwebhedi kunye nesifuba sedrowa. Ngokukhupha itafile esecaleni kwebhedi, ibhedi inokutsalwa ukuze inike enye eyongezelelweyo kwinqanaba elisezantsi. Ngelixa oku kufanelana nabantwana abancinci, akusayi kunika intuthuzelo enkulu kubantu abadala. Omabini amagumbi amabini anefriji, iketile, imicrowave kunye netoaster ukwenzela iindwendwe zilungiselele isidlo sakusasa sakusasa kunye nazo naziphi na ezinye iisnacks okanye ukutya okufunekayo. Sibonelela ngobisi, ijusi yeziqhamo, iisiriyeli ezikhethiweyo kwaye siya kubonelela ngezonka, izisasazelo, iziqhamo njl.njl njengoko kuceliwe.
Amagumbi anokudityaniswa ukuze intsapho enabantu abahlanu ikwazi ukuhlala kamnandi ngokubhukisha omabini amagumbi.
Ngokuthumela kum isicelo sokubhukisha ngokuthe ngqo ubhukisha igumbi elinye elinegumbi lokuhlambela eline-ensuite. Ukubhukisha omabini amagumbi okulala, nceda uthumele umbuzo ngexabiso eliya kulungiswa ngokwenani labantu onqwenela ukubabonelela. Njengesikhokelo, umntu omnye egumbini uya kuhlawula i-£50 kwaye umntu ngamnye owongezelelweyo kwelo gumbi uya kuhlawula enye i-£10 ukuya kutsho kubantu abahlanu ubuninzi kwigumbi lokuqala nabane kwigumbi lesibini. I-Airbnb yenza intlawulo yokubhukisha ngaphezulu koku.
4.72 · Izimvo eziyi-199
I-Spellbrook yilali encinci ene-pub/restaurant yenkulungwane yeshumi elinesithathu, isikolo samabanga aphantsi kunye negumbi lokuthengisa iimoto. Indawo yolondolozo lwendalo esecaleni komjelo likhaya leentaka ezininzi nezilwanyana kwaye ngamaxesha athile onyaka iinyathi zamanzi zityiswa khona.
Ekufikeni kwakho siya kudibana nawe sikubonise indawo yokuhlala kwaye sikunike ikhowudi yesango lokhuseleko. Suku ngalunye sondlula iibhedi zakho kwaye sithatha iwashing yakho ukuze icocwe.